Isitolo esidayisa yonke impahla Joybold Jb520 Ce Certificates Lcd Screen 10 "honeycomb Wheel Electric Scooters Factory Manufacturer and Supplier | Jinbang
Ibanga:UMax. 30km noma 45km noma 60km
UMax. Layisha: 120 kg
Ukushaja Isikhathi: 5h noma 7h
Ijubane: 10km / h, 15km / h, 25km / h
Isikrini se-LCD: Amandla, Izinga Lesivinini, Isivinini Sangempela Sokugibela.
I-BMS: Ukushisa ngokweqile, isekhethi elifushane, ukuvikelwa okungaphezulu kwamanje nokukhokhiswa ngokweqile
IbhethriI-LG 18650 Cell * 30 noma 40, 7.8 Ah noma 10Ah noma 14Ah, 36 V
Ishaja: Okokufaka AC / 100-240 V, Okukhipha 42V, 1.5A noma 3A
Ibhuleki: Ama-Brake System Amabili (i-Front Electronic Brake ne-Rear Disc Brake).
Isondo: ITire lezinyosi, 10 ″
Izitifiketi: I-CE (EN17128), i-EKFV, i-UL 2271, i-RoHs, i-UN38.3, i-MSDS / i-Air and Sea Transportation Appraisal, Kungabhaliswa i-ABE.
Ukupakisha: Ibhokisi Lokuthengisa (125 * 21 * 46cm / GW 22kg / NW: 19.5 kg), 1 pcs / ctn ”
Isitsha Kuyalayishwa: Ama-180 ama-PC / 20GP, ama-400 ama-PC / 40HQ
Ibhethri elikusikuta sakho se-EcoReco liyi-state-of-the-art elishajekayo iLithium FerroPhosphate (LiFePO4, noma i-Li-Iron). Ituhlobo lwebhethri olufanele kunazo zonke nohlobo oluthuthukile lwezinhlelo zokuthutha zomuntu siqu. ilula kakhulufuthi incane, futhi inikeza impilo ende kunebhethri le-Acid Lead Acid eliphelelwe yisikhathi. Kubuye kuphephe ngokwemvelofuthi inobungani bemvelo kunebhethri le-Li-Ion.
Langaphambilini Isikuta Sikagesi JB516B
Olandelayo: I-E-Scooter JBHZ K01